Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Kacdoon Wadayaasha oo Kubaaqay Shaqo Joojin Itoobiya Kadhacda.
Hogaanka Kacdoon Wadayaasha oo Kubaaqay Shaqo Joojin Itoobiya Kadhacda.
Posted by Dulmane	/ December 24, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay kacdoon wadayaashu kudhawaaqeen shaqo joojin guud oo kadhacda guud ahaan wadanka Itoobiya, gaar ahaan Gobolada ay kacdoon wadayaashu kubadan yihiin.
Sida xogta aan kuhelayno hogaaminta kacdoon wadayaasha ayaa dadwaynaha lagumaysto ee ree Itoobiya kacodsaday in ay si isku mid ah ubilaabaan shaqo joojin guud oo guud ahaan wadanka kadhacda si loo curyaamiyo taliska wayaanaha.
Kacdoon wadayaasa kasoo horjeeda xukunka guracan ee taliska wayaanuhu uu wadanka kumaamulayo ayaa dhowr jeer oo hore shaqo joojin sameeyay, waxayna kacdoon wadayaashu talaabadaas uqaadeen in ay is hortaagaan howlaha uu taliska wayaanuhu kawada gudaha iyo dibada wadanka.
Talaabadan ayaa lasheegayaa in ay waxbadan udhimi doonto dhaqaalaha wadanka iyo waliba daganaanshaha dhinaca amaanka, waxaana lasheegayaa in nolosha koobaad ee wadanku uu yahay shaqaalaha iyo waliba waxsoosaarkooda dhinac kasta ah.
Sidoo kale hogaanka kacdoon wadayaasha ayaa lasheegayaa in uu dadwaynaha ka codsaday in ay takooraan ciidamada nacabka ah ee wayaanaha, kuwaas oo sida lasheegay gaystay xasuuq aad ubadan oo kadhacay guud ahaan wadanka.
Dhinaca kale magaalada Addis Ababa ayaa kujirta dhowr bilood oo go’doomin ah, waxaana lasheegayaa in ay kacdoon wadayaashu xidheen dhamaan wadooyinka soo gala magaalada iyo kuwa kabaxa labadaba.